Adeegyadda Turjibaanka iyo Fasiridda
Dhammaan waalidiinta iyo masuuliyiinta ardayda Dugsiyada Dadweynaha Seattle waxay xaq u leeyihiin in ay helaan warbixin ku saabsan waxbarashada caruurtooda oo ku qoran luuqad ay fahmi karaan.
Shaqaale loo qoondeeyay oo ku hadla labo luqood ayaa bixin doona turjumida iyo fasiraada sagaalkeena luqdood ee ugu sareeya. Luqadaha kale (oo ay ku jiraan Luqadda Astaamaha ee Mareykanka) ayaa lagu heli karaa codsi. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan adeegyada turjumida iyo fasiraada waxay laga heli karaa webpage-keena.
Xarunta Ogolaanshaha iyo Adeegyada Diiwaangelinta
Ka baro sida loo diiwaan geliyo ardayga cusub iyo macluumaad ku saabsan diiwaan gelinta furan ee doorashada dugsiga (codsashadda dugsi kale) webside-keena Diiwaangelinta.
Dugsiyada Dadweynaha Seattle waxay bixiyaan Adeegyada Waxbaridda Heerka Sare/Barashada Heerka Sare ee ardayda lagu qiimeeyo oo loo qoondeeyey inay yihiin bartayaasha heerka sare ah. Faahfaahin dheeraad ah ka fiiri webpage-keena Barashada Heerka Sare.
Qoysaska waa in ay la xiriiraan dugsiga marka ay ardaydu ka maqan yihiin. Ka fiiri macluumaadka xiriirka dugsiga webpage-ka buugga dugsiga.
Ka fiiri imaanshaha ardaygaaga The Source.
Ka hortagga cagajuglaynta iyo dhibaataynta
Dugsiyada Dadweynaha Seattle waxaa ka go'an inay siiyaan dugsiyo ammaan ah, soo dhaweyn leh, oo loo dhan yahay dhamaan ardayda oo dhan. U soo sheeg wixii walaac ah ee ku saabsan u xoogsheegashada ama kadeedka maamulaha dugsiga ardaygaaga ama kaaliyaha maamulaha. Ka fiiri macluumaadka xiriirka dugsiga webpage-ka buugga dugsiga.
Ka fiiri kheyraad dheeraad ah oo ku saabsan Xafiiska Xuquuqda Madaniga Ardayda webside-ka.
Ka fiiri taariikhaha sanad dugsiyeedka muhiimka ah iyo dhacdooyinka degmada webpage-keena taariikhda.
Bixiyeyaasha Daryeelka caruurta
Ka raadi macluumaad ku saabsan dugsiga barbaarinta, bixiyayaasha daryeelka caruurta ee dugsiga ka hor iyo ka dib , iyo kheyraadka si ay kaaga caawiyaan bixinta kharashka daryeelka webpage-keena Waxbarida Hore.
Diyaargarowga Kuliyadda iyo Shaqada
Ka fiiri waxa ay ardaydu u baahan yihiin si ay u qalinjibiyaan sharuudaheena qalinjibinta ee webpage-ka
Ka fiiri macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida ardayda u sahamin karaan fursadaha xirfadaha iyo tababarka farsamada ee Waxbarashadeena Farsamada iyo Xirfadaha Webpage-ka.
Degmada iyo dugsiyada waxay kula soo xiriirsiiyaan qoysaska xusuusinta muhiim ah iyo macluumaadka deg deg ah telefoon iyo email. Ka baro sida aad u astaysto sida aad u hesho isgaarsiinta dugsiga iyo degmada webpage-keena doorashada isgaarsiinta.
Foomamka iyo Ogeysiisyada Rasmiga ah
Ka fiiri foomanka qoysaska u baahan karaan si ay u dhamaystiraan qoritaanka ardaydooda. Ka fiiri foomanka la turjumay ee muhiimka ah webpage-keena foomamka la turjumay.
Ka aqriso ogeysiisyada degmada ee rasmi ah ee ardayda iyo qoysaska Dugsiyada Dadweynaha Seattle webpage-keena ogeysiisyada rasmi ah.
Ka fiiri macluumaadka caafimaadka guud ee ardayda oo dhan, oo ay ku jiraan shuruudaha tallaalka iyo foomamka caafimaadka, webbage-keena Adeegyada Caafimaadka.
Shaqaalaha Barnaamijka McKinney-Vento waxay caawin karaan ardayda iyo qoysaska ay haysato guri la'aanta. Ka fiiri Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Barnaamijka McKinney-Vento.
Qadada iyo Cuntada Iskuulka
Eeg liiska cuntada dugsiga.
Bixi cuntada dugsiga.
Waxaad ka coddsan kartaa lacagta qadada bilaashka ah ama qiimaha jaban.
Dhexdhexaadiyuhu, waa ruux madax bannaan, xirriiriye dhex-dhexaad ah si ay uga caawiyaan qoysaska colaadaha iyo cabashooyinka aan lagu xalin karin ilaa iyo heerka dugsiga. Faahfaahin dheeraad ah ka fiiri webpage-keena Dhexdhexadiyaha.
Kheyraadka Akademiga Onlineka
Ka fiiri xiriiriyaha khayraadka tacliinta onlineka qaybteena khayraadka tacliinta online ee ardayda.
Dugsiga barbaarinta iyo Waxbarashada Hore
Ka baro fursadaha iyo barbaarinta carruurta iyo sida loo qorto ardayda kindergarten webpage Waxbarashada Hore.
Schoology waa aalad ay macalimiinta u isticmaali karaan in ay kula xariiraan waalidka, masuulka, iyo ardayda waxyaabaha ku saabsan koorsooyinka maalin-ka-maalin, sida taariikhaha iyo shaqooyinka dugsiga. Soo booqo Schoology
Isticmaal Source si aad u aragto jadwalka ardayga, natiijada qiimeynta, imaanshaha, macluumaadka maktabada, iyo fasalada ardayda dugsiga sare. Soo booqo The Source
Waxbarashada Qaaska ah
Waaxda Waxbarashada Gaarka ah waxay si iskaashi ah ula shaqeeysa si loo hubiyo helitaanka iyo guusha ardayda naafada ah. Faahfaahin dheeraad ah ka fiiri webpage-keena Waxbarashada qaaska ah.
Wixii macluumaad ah oo ku saabsan basaska dugsiga iyo gaadiidka, ikhtiyaarada booqo boga internetkeena Gaadiidka.
Waxaan kugu marti qaadayna inaad ku gooshto bogga internetka ee SPS luqaddaada si aad u hesho macluumaad ku saabsan waxbarashada ilmahaaga.
Buttoonka Google Translate wuxuu bixiyaa turjumaad saxda ah ee macluumaadka bogga web kasta, oo u eg yahay sidan:
Wixii macluumaad ama gargaar dheeraad ah, fadlan kala soo xiriir Adeegyada Turjibaanka & Fasiraadda: (206) 252-0070 ama languages@seattleschools.org